Sungunuka Kupusha Zvishandiso, Elevator Escalator Tooling, Slitting Machine - Hongli
Yakatangwa muna1997, Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments Co, Ltd inyanzvi uye inotungamira yekugadzira yezvakawanda zvekuongorora michina kusanganisira Dhijitari Thermometers, Infrared Thermometers, uye Dhijitari Sphygmomanometers etc. yedu yekumwedzi mwedzi ingangove mazana masere mazana mana ezviuru zvezvikamu zve thermometer uye zviuru zana for Sphygmomanometer.
Sebhizimusi repamusoro tekinoroji, dhipatimendi redu reR & D rinosanganisira mainjiniya, nyanzvi uye mugadziri ane ruzivo rwakawanda rwe optoelectronics, semiconductor uye IC dhizaini.
Iko kushandiswa kweNokia servo motors uye Nokia yekufamba inodzora inogona kupa iyo yakagadzikana tension control optimized chimiro, iri nyore online inoshanda system, uye inogona kubatana neInternet yezvinhu. Iyo yekudzivirira kure inoenderana neiyo main control system, ine mashoma ma nodi uye yakakwirira kuvimbika. Cylinder control Iyo shaft-isingashande isingafadzi inogona kuve yakagadzirirwa maererano nezvinodiwa nevatengi, uye zvakasiyana-siyana zvinogadziriswa zviripo.
Yakanyanya kutsanangudza, nzvimbo yakagadzikana yemagetsi, yakadzika yekushanduka kwekuchinja. Iko kushandiswa kwehuremu hwehuremu hweyera uye U-yakatemerwa kuyera inoita kuti data rive rakanyanya. Iyo gantry mota inodzorwa neJapan Panasonic servo mota, ine yakakwirira kugadzikana. Uchishandisa Keyence yakabatanidzwa sisitimu, maindasitiri touch screen control control, kushanda kwacho kuri nyore uye kwakavimbika. Yeyero yedata, etc. inogona kungoiswa mu database kuti ifambise ramangwana data query uye traceability yeiyo chigadzirwa.